Daawo: Trump oo go’aan la yaab leh ka heshiiskii nukliyeerka iiran iyo Ruuxani Jawaab adag kasoo bixiyey ! (Muuqaal) - Hablaha Media Network
Daawo: Trump oo go’aan la yaab leh ka heshiiskii nukliyeerka iiran iyo Ruuxani Jawaab adag kasoo bixiyey ! (Muuqaal)
HMN:-Madaxweyne Trump ayaa sheegay in aanu ku qancayn in Iran dhaqan gelisay heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka ee la saxeexay 2015-ki, in kasta oo aanay afkiisa ka soo bixin in uu gebi ahaan ba laalayo heshiiskaa.
Hadii taasi suurto geli weydana wuxu sheegay in uu awoodiisa madaxweyne u adeegsan doono sidii gebi ahaanba Maraykanku uga bixi lahaa heshiiskaa, Wuxuuna ballan qaaday in aanay Iiran u suurto gelin doonin in ay hub nukliyeer ah samaysato, waxaanu heshiiska ku tilmaamay kii ugu xumaa ee weligii Maraykanku galo.
Dhinaca kale Madaxweynaha Iran, Xasan Ruuxaani, ayaa su’aal geliyey hadalkii Madaxweyne Trump ee ahaa in aanu ku qancayn dhaqan galka heshiiskii ay dhawrka dal iyo Iran wada saxeexdeen.
Isaga oo hadal ka jeedinaya Telefishanka Iran, ayaa hogaamiyaha Iran yidhi Madaxweyne Trump wuxu doonayey in Congress-ka Maraykanku qodobo cusub ku daraan heshiiskaa, isaga oon dhaadanayn in aan mar hadii la saxeexay waxba lagu darin karin lagana bedeli karin.
Ruuxaani wuxu sheegay in Iran heshiiskaa nukliyeerka u aragto mid dhinacyo badani ku heshiiyeen isla markaana ay dhaqan gelin doonto ilaa inta ay dalalkaa kalena inta ka khusaysa heshiiska dhaqan gelintiisa wadaan.
Waxa kale oo uu sheegay in Iran aanay marnaba u liici doonin cadaadiska iyo colaadda Trump, balse ay sii laban laabi doonto kartideeda gaashaan dhigga.